Home Somali News USA:Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Oo Kulan La Yeeshay Mudane Ka tirsan Baarlamaanka...
Madaxweyne Ku Xigeen Jamhuuriyadda Somaliland. Md C/raxman C/laahi Zaylici ayaa Kulan muhiim ah la yeeshay, congressman Keith Ellison. oo ah Xildhibaan ka tirsan Golaha Baarlamaanka Dalka Mareykanka, waxaanu xildhibaanka u sharaxay qadiyada Somaliland iyo marxaladihii ay soomartay iyo halka maanta ay marayso,isla markaana ay tahay qadiyadoodu mid aan ka noqosho lahayn wax kastana ay u soo hureen una huridoonaan.
M/weyne ku xigeenku wuxuu xildhibaanka kala hadla inuu kala shaqeeyo wanaajinta xidhiidhka dalkiisa iyo ka gobolka Minnesota ee laga soodoorto iyo Jamhuuriyada Somaliland,taas oo uu balan qaaday Md Keith Ellison isagoo sheegay inuu horena u waday hadana awooda saaridoono sidii uu xidhiidhkaasi u sii xoogaysan lahaa.
Waxaa kulankaa goobjoog ka ahaa Jibriil Abuubakar oo ka tirsan golaha dhexe ee Xisbiga kulmiye iyo Prof. Axmed Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan reer Somaliland ah isla markaana ah bare sare oo wax ka dhiga jaamacad ku taala gobolkan Minnesota.
M/weyne xigeenku wuxuu ku sii sugnaandoonaa waqooyiga maraykanka mudo tobaneeyo maalmood ah mudadaas oo uu la kulmidoono jaaliyadaha kala gedisan ee gobolada USA Iyo Canada iyo sidoo kale madax badan ayaa u qorshaysan inuu la kulmo M/weyne kuxigeenku.